Soo-saaraha Soo-saaraha Ac-L-Glutamic iyo Alaab-qeybiye | Haitiyaan
Wax soo saarka: L-Glutamic Acid
CAS Maya.: 56-86-0
Heerka: CP, AJI
Waxqabadka iyo dalabka: Kaabayaasha nafaqada, cuntada lagu daro, waxyaabaha la isku qurxiyo ee alaabta ceyriinka ah, kuwa dhexe ee dawooyinka, iwm
Baakadaha: 25kg / bac (durbaan), kuwa kale sida loogu baahan yahay
cad oo midab yar
Waxqabadka: L-glutamic acid inta badan waxaa loo isticmaalaa soo saarista 'monosodium glutamate', dhir udgoon, iyo sidoo kale bedelka milixda, nafaqada nafaqada iyo reagent-ka kiimikada. L-glutamic acid lafteeda ayaa loo isticmaali karaa daawo ahaan si looga qayb qaato dheef-shiid kiimikaadka iyo sonkorta maskaxda isla markaana loo dhiirrigeliyo hannaanka qiiqa. Badeecada waxay ku darsameysaa ammonia jirka si ay u sameyso glutamine aan sun aheyn, taas oo yareysa ammonia dhiiga waxayna yareysaa calaamadaha miyir beelka beerka. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo kooma cagaarshowga iyo yaraanshaha beerka oo daran, laakiin saameynteeda ma aha mid aad loogu qanco; markii lagu daro daawooyinka ka hortagga suuxdinta, waxay wali daaweyn kartaa suuxdinta yaryar ee suuxdinta iyo suuxdinta nafsaaniga ah. Racemic glutamic acid waxaa loo isticmaalaa soosaarka daawooyinka sidoo kale waxaa loo isticmaalaa reagent biochemical.
Badanaa kali kali looma isticmaalo, laakiin waxaa loo isticmaalaa iyadoo lala kaashanayo phenol iyo quinone antioxidants si loo helo saameyn is-dhexgal wanaagsan.
Glutamic acid waxaa loo isticmaalaa inuu yahay wakiil isku murginaya dahaadhka koronto la'aanta.
Waxaa loo adeegsaday dawooyinka, cuntada lagu daro, nafaqeeyayaasha nafaqada;
Baadhitaanka kiimikada, waxaa loo isticmaalaa daawada si looga hortago miyir beelka cagaarshowga, looga hortago suuxdinta, yareynta ketonuria iyo ketemia; waxay waxtar u leedahay cudurka beerka, shisoofrani, iyo neurasthenia
Bedelka cusbada, kaabayaasha nafaqada, wakiilada dhadhanka (inta badan loo isticmaalo hilibka, maraqa, digaaga, iwm.). Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa kahortaga kristantariyada magnesium ammonium fosfateerka ee alaabta biyaha ku jirta ee qasacadaysan sida shrimps iyo carsaanyo, oo leh qiyaasta 0.3% ilaa 1.6%. Waxaa loo isticmaali karaa sidii uunsig sida ku cad xeerarka waddankeyga GB 2760-96;
Mid ka mid ah cusbada sodium, sodium glutamate, ayaa loo isticmaalaa sidii xawaash ahaan, alaabada ganacsi waxaa ka mid ah MSG iyo monosodium glutamate.
Hore: L-Aspartic acid